Umthandazo wokwahlula abantu ababini? [Ukwahlukana okokugqibela]
7 Ukufundwa kweMin
Umthandazo wokwahlula abantu babini iSan Alejo Rapido isebenza kwezo meko apho usapho lwethu, uzinzo lwethu lweemvakalelo kunye nolwazelelelo okanye impilo yabantwana bethu okanye iqabane lethu lisengozini.
Umzekelo, kwimeko ethile apho iqabane lethu lifunelwa imisebenzi esikholelwa ukuba aliyi kuxhamla, kodwa endaweni yoko liya kumenzakalisa, ke esi sigwebo sivumelekile.
Kwiimeko apho isetyenziswa kakhulu, kukwahlukanisa iqabane lethu langaphambili kunye neqabane lethu langoku elizimisele ukubuyisela ubudlelwane ebesinabo okanye ukuthintela iqabane lethu ukuba lisishiyele omnye umntu.
1 Ngaba umthandazo wokwahlula abantu ababini ngokukhawuleza uyasebenza?
1.1 Umthandazo kuSan Alejo ukwahlula abantu ababini ngokuqinisekileyo
1.2 Umthandazo wokwahlula abathandi ngokuqinisekileyo
1.3 Thandazela abantu ababini ukuba balwe kwaye bazondane
1.4 Umthandazo wokugqibela wokwahlula
2 Ngaba ndingawuthandazela umthandazo wokwahlula abantu ababini komnye umntu?
Ngaba umthandazo wokwahlula abantu ababini ngokukhawuleza uyasebenza?
Uthando yinto enzima kakhulu.
Ukuba uthando oluphakathi kwaba bantu aluyonyani, umthandazo uzakusebenza.
Naluphi na uthando olungenamandla, ngaphandle kokuziva okanye inkanuko luyaphula ngokulula ngezi imithandazo.
Bagqibela ngokungaqinisekanga, ngeengcinga zothando nangawo onke amakhonkco phakathi kwaba bantu babini.
Kuphela ngabantu abatshatileyo abanothando oluchazwe kwangaphambili abaya kusinda kubo.
Ngaphandle koko, uya kukwazi ukwahlula abathandi, amakhwenkwe kunye nabatshatileyo kwiintsuku ezimbalwa zomthandazo.
Umthandazo kuSan Alejo ukwahlula abantu ababini ngokuqinisekileyo
Wena onesizinda sokushiywa ngaphandle.
Yonke into eqhubekayo ejikeleze abanyulwa beNkosi, ndiyakucela ukuba urhoxise (Umntu wokuqala igama) ukusuka ku (Eli gama lilandelayo kuthiwa) Kurhoxisiwe, iSt. Alejo, ukuya (Igama liyaphindaphindwa).
Yendinyana yakhe kunye nobomi bakhe ukuze angakholelwa kuthi somonakalo ngakumbi. Ndiyakucela, San Alejo, ukuba nam ndikwazi ukufikelela ebomini bakhe.
Ukuba abalawuli ukusebenzisana nomnye komnye, Oko bangakufikeleli ukuba kunye, Nokuba kwitheyibhile yepeyinti, Nokuba kwisitulo sokuphumla, okanye kwigumbi lokuphumla ukuze ube nemfesane, Okanye embhedeni ukulala ungaziva
Ukuba abanako ukubambelela kwithemba. San Alejo, zibase ngokugqibeleleyo.
San Alejo owaziwayo, njengosikelelekileyo wosikelela ndicela undinike isicelo sam ngokukhawuleza, Ukuze iqabane lam ligoduke ngoku Ukuze lize ekhaya kunye nosapho.
Ndiyabulela ngokundiva, ungumzekelo San Alejo, kwaye ndinikezela ilizwi lam ukuba ndisasaze umthandazo wakho ukuba uyandivumela ukuba siphinde sithandaze kwakhona kusapho lwethu.
Wanga umphefumlo endicela ukuba uhlukane Ungabuyi uzokuvela ebomini bam Amen.
Kukho iimeko apho singenakubona nje abantu ababini kunye, nasiphi na isizathu kwaye sifuna ukuba bohlukane, ukufezekisa oku ngokukhuselekileyo nangokuphumelelayo akukho nto ilunge ngakumbi Umthandazo kuSan Alejo.
Kwesi sivakalisi kufuneka ube negama labantu ababini esifuna ukwahlulwa kubo kuba kufuneka usitsho phakathi kwesivakalisi.
Ngumthandazo ongqalileyo wokuba abo bantu babini banganyamezelwanga, abanqweneli kukwabelana ixesha elithile kwinkampani enye, baphazanyiswe kukubakho kwesibini, ke abanamnqweno wokudibana kwakhona kwaye ukusuka umzuzwana ukuya kwelinye, bayazicekisa ukuya kuthi ga kwinqanaba lokufikelela ekwahlukaneni nabo.
Lo mthandazo unamandla amakhulu., ke ayifuneki ukwahlula isibini kangangexesha elithile kodwa endaweni yoko kukuba ukwahlukana ngokuqinisekileyo.
Umthandazo wokwahlula abathandi ngokuqinisekileyo
Owu, Santa Muerte ndiza kuwe ukuzokucenga ukuba undincede, ndidanile ebomini, ndinike iminyaka yam entle kwindoda endiyithandayo ehlukane nam ukuba ahambe nomnye umfazi wohlwaya lo mfazi undonzakalisayo, Ufuna ukuchitha umtshato wam kude (igama lalomntu) ukuze abuyele kum ngonaphakade.
USanta Muerte, yenza (igama lalomntu) aqale ukumthiya kwaye angamthembi, qaphela ukuba bayamsebenzisa, yonke into ayifunayo yimali yakhe kwaye kumnandi ukonwaba ngenxa yakhe, ndicela uhlukanise isithandwa sam kuyo yonke into yintoni emenza ahlukane nam iinyembezi azisulelayo ngenxa yomnye, ziba ziinzingo ezinzima kuye.
Owu, Ntombazana eMhlophe sebenzisa amandla akho ukuze ukhuphe omnye umfazi kulo mdlalo, Santa Muerte ndiyakucela ukuba ubuyise (igama lalomntu) ngalo mzuzu phambi kwam undibuyisele ululamile njengemvana encinci, ulibale igama omnye umfazi undenzela i dessert ngeenyawo ndicela undixolele.
Owu, Santa Muerte yenza loo (igama lalowo mntu) ukungamelani neminqweno yam yenza engqondweni yakho cinga kwakhona kwakhona ndicela uxolo, uxolo undibethelele uthando ukuba singaphinda sonwabe njengangaphambili ungandishiyi ndedwa uSanta Muerte .
Abathandi Baziwa njengomntu wesithathu ongenelela kubudlelwane obuzinzileyo kwaye bayingxaki eyoyikekayo ekufuneka kujongwane nayo ngobukrelekrele.
Enye yeendlela zokwenza umthandazo okhethekileyo apho injongo efunekayo ingafezekiswa ngaphandle kokuwela kungqubano.
Lo mthandazo wokwahlula abantu ababini (abathandi) uphumelele uninzi lokuzinikela ngenxa yokusebenza kwawo.
Nje ukuba ube nezimvo ezicacileyo, qhubeka uthandaze, inokwenziwa nangaliphi na ixesha, nokuba uphi na, into ekhuthazwayo yeyokuba yenzelwe ngokunyaniseka okukhulu kwaye, njengakuzo zonke iimeko zemithandazo, ngokholo olukhulu.
Thandazela abantu ababini ukuba balwe kwaye bazondane
Saint Cyprian, wena ungoyena unamandla kubo bonke abanamandla, ndicela uncedo lwakho, uthando lwakho, sobabini senziwe ukuba sihlalisane, ndicela nindicebise kude 1 kuye ku-2, ndifuna amandla akho isetyenziselwe ukwahlula aba bantu babini.
Awufuni kubona, hlalani kude nomnye. Ndiyazi ukuba niyakwazi ukulawula uthando kwaye niyazi ukuba kukho abantu abangazalelwanga ukuba bahlalisane njengabo, banokuqiniseka ukuba akufuneki babe kunye, ndiyafunga.
O unamandla uSanta Cyprian, unamandla amakhulu, ndicela ukuba usebenzise amandla akho, ukuze aba bantu bahlukane, abanakuqhubeka kunye, abanakuhlupheka kwakhona, ndiyazi badinga ukwahlulwa, esi sibini asiyonto Umzekelo wovuyo.
Ndithandaza lo mthandazo ukwahlula abo bantu bangonwabanga, ndiyazi ukuba angonwaba ngakumbi kum, ndiyazi nokuba lo mthandazo uza kusebenza ngokuchanekileyo, makube njalo.
Asibheki ngenzondo, singabantu abanoxolo abakholelwa kwincoko yamaxesha onke njengendlela yokusombulula iingxaki nokuba ngubani okanye ngubani.
Ngoku, ngale ndlela, ezi zivakalisi zenziwe ngenjongo Dala ubutshaba kwiimeko apho amandla amabi ahamba Ukungcolisa umntu olungileyo.
Singamandla kwaye kungoko kufuneka sihlala sibanakekele abo basingqongileyo kwaye singcolise nemeko yekhaya lethu.
Ukuba lo mthandazo wokuba abantu babini balwe kwaye bathiye omnye komnye senza kwilungu losapho lungcono kakhulu, kuba amandla afanelekileyo aya kuthatha amandla amaninzi ekhaya ekutsaleni impendulo yomthandazo wethu.
Umthandazo wokugqibela wokwahlula
Ndinika la mazwi ebantwini ...
Okoku ngoku zijikeleze ingqondo yam, ukuze, xa ndigqibezele, kubekho kuphela ukunganyani kunye kwaye bangaphinde baphinde bahlale kwakhona.
Umzabalazo mawube yinxalenye yobomi babo ukusukela ngoku kwaye, Xa ilixa lokugqibela lifikile, bayahlukana ukuze bangaze bahlangane.
Ukuba oko bakha ubuhlobo namhlanje akukho nto ingaphezulu nje kokuthetha nje kwaye banokuhamba ngendlela eyahlukileyo kwixesha elizayo ukuze bangaphindi bahlangane.
Bayeke le nto ngaphakathi okanye nzulu kweMiphefumlo yabo bafumane endikucelayo ngokholo.
Kule meko asiceli ubutshaba okanye ikhefu lomzuzwana.
Kwesi sivakalisi esithile kufuneka siphumelele ulwahlulo oluqinisekileyo.
Ingasetyenziswa kwiimeko ezininzi kubudlelwane bothando nakulwalamano olunyulu nolunyulu.
Kukho abantu abathi nangona benika umbono wokuba neenjongo ezintle bahlala bezisa nentaba yamandla amabi okanye iinjongo ezifihlakeleyo ezingalunganga konke konke.
Kule mithandazeli lo mthandazo uba kuphela kwendlela yethu yokuphumelela.
Ngaba ndingawuthandazela umthandazo wokwahlula abantu ababini komnye umntu?
Unokuthandaza nakubani na ngaphandle kwemida.
Kodwa sebenzisa kuphela umthandazo xa kufuneka njalo. Sukuzama ukwahlukanisa izibini ngaphandle kweenjongo zazo.
Ezi zithethe zinamandla kwaye akufuneki zisetyenziselwe nayiphi na injongo.
Sebenzisa kuphela umthandazo wokwahlula abantu ababini ngokuqinisekileyo nangokuzahlula ngokukhawuleza kwiimeko zesidingo sokwenyani.
Umthandazo wokuthengisa indlu
Umthandazo kwiNgcwele uMikayeli weengelosi
Kwakutheni ukuze uYesu abhaptizwe?
Oktobha 22, 2021
Uxolela njani umntu ngokwebhayibhile
Ungasindiswa njani ngokwebhayibhile
Oktobha 21, 2021
Yintoni injongo yobomi ngokweBhayibhile